Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ)
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) ကဘာလဲ။
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းဆိုတာ နှလုံးဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ အဆို့ရှင်အဖက်၂ခုက သေချာမပိတ်နိုင်တော့ဖြစ်ပြီး တချို့မှာပြားကပ်ပြီး နှလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ခန်းနံရံကို ကပ်နေလေ့ရှိတယ်။ နှလုံးသွေးကြောမကြီးရဲ့ အဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကို Click-murmur Syndrome (နှလုံးငြီးသံ) ၊ Barlow’s Syndrome? Floppy valve syndrome လို့ခေါ်ကြတယ်။
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းသဟာ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီး လူဦးရေရဲ့ ၂-၃%မှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ နှလုံးသွေးကြောမကြီးရဲ့ အဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းရဲ့ ၂-၃%ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံက လူဦးရေ ၇.၈သန်းမှာဖြစ်နိုင်ပြီး တကမ္ဘာလုံးမှာ ၁၇၆သန်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကို အသက် ၅၀ကျော်အမျိုးသားတွေမှာ အတွေ့ရများပါတယ်။ တွယ်ဆက်တစ်ရှူး(ကော်လာဂျင်၊ အရွတ်များ၊ တွယ်ဆက်တဲ့ Ligment များ)ပုံမမှန်တဲ့ရောဂါနဲ့ မွေးလာတဲ့လူတွေမှာ ဒီရောဂါကို တွေ့ရများပါတယ်။
သို့သော် အဖြစ်များစေတဲ့အကြောင်းတွေကို လျှော့ချပြီး ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုသော အချက်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းပါ။
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းဟာ မပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်သော်လည်း လူတော်တော်များများမှာ ရောဂါလက္ခဏာခံစားရလေ့ မရှိပါဘူး။ ရောဂါရှာတွေ့လျှင် လူတွေက သူတို့မှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။
ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေပြလာလျှင် နှလုံးကသွေးတွေက အဆို့ရှင်ကနေတဆင့် နောက်ပြန်စိးဆင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာဟာ တယောက်နဲ့တယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ ရောဂါက ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိပ်မဆိုးဘဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ –
နှလုံးခုန်အရမ်းမြန်ခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးခုန်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
အသက်ရှူရခက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူမဝခြင်း။ လှဲအိပ်နေချိန်နှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ချိန်မှာတွေ့ရများပါတယ်
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်နှင့်ပြသပါ။
တခြားရောဂါအခြေအနေတွေကလည်း နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်တာနဲ့ လက္ခဏာတူနိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်သာ သေချာသိနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာရင်ဘက်အောင့်နေပြီး နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ထင်လျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အမြန်ရယူပါ။
သင်မှာ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်တဲ့ရောဂါ ရှိတယ်လို့ သိထားလျှင် ရောဂါလက္ခဏာမဆိုးခင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
တကယ်လို့ မေးမြန်းလိုတာရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။ လူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓါဟာ တုံ့ပြန်မှုမတူတတ်ကြပါဘူး။ သင့်အခြေအနေကို ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါ။
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကို အဖြစ်များစေတဲ့အကြောင်းမှာ အဆို့ရှင်ရဲ့ အဖက်တွေက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ဆန့်ထွက်နေလို့ ဖြစ်တယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းက လူဦးရေရဲ့ ၂%မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ပြီး မွေးလာနိုင်ပါတယ်။ တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာ( ဥပမာ- တွယ်ဆက်တစ်ရှူးရောဂါ) များကြောင့်လည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်နှလုံးက အလုပ်လုပ်သောပြီး နှလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ခန်းကညှစ်စောအခါ နှလုံးသွေးတွေ ဘယ်လက်အပေါ်ခန်းကို ပြန်မရောက်စေရန် အဆို့ရှင်က ကာပေးထားပါတယ်။
အဆို့ရှင်ပြားကပ်နေတဲ့အခါ ပိတ်တဲ့နေရာမှာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်သွေးတွေက နောက်ပြန်စီးဆင်းပါတယ်။
သွေးအနည်းငယ်သာ နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်းဆီ နောက်ကိုပြန်စီးဆင်းခြင်းက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေမှာ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းအနည်းငယ်ကိုက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မိသားစုထဲမှာ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ဖူးလျှင်၊ တကယ်လို့သင့်မိဘ ဆွေမျိုးတွေမှာ ဖြစ်ဖူးလျှင် သင့်မှာ ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့တချို့သော အခြေအနေများမှာ
လူကြီးများတွင် ကျောက်ကပ်ယောင်ခြင်း – မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ကျောက်ကပ်များ ယောင်ခြင်း
တွယ်ဆက်တစ်ရှူးပြဿနာများ (ဥပမာ- Marfan’s Syndrome) မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် အရိုးများ၊ နှလုံးသွေးကြော၊ မျက်လုံးနှင့် အရေပြားရှိတွယ်ဆက်တစ်ရှူးများကို သက်ရောက်မှုရှိခြင်း။
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
များသောအားဖြင့် ဆရာဝန်က သင့်နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းရှိလျှင် သင့်နှလုံးခုန်သံမှာ ကလစ်အသံကြာရနိင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်နေချိန်မှာ ပိုသိသာပါတယ်။ ဒီအသံကြားပါက ဆရာဝန်က တခြားစစ်ဆေးမှုတွေကို လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရောဂါနာမည်မတပ်ခင် ဆရာဝန်မှ သင့်နှလုံးအခြေအနေကို ပိုသိရန် စစ်ဆေးမှုတွေများစွာ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကတော့-
နှလုံးဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့် Echo ရိုက်ခြင်း။ ဒီ၂မျိုးလုံးက နှလုံးရဲ့ပုံကို သိစေနိုင်ပေမယ့် Echo ကပိုပြီး သေချာပြနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က ဒီပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး သင့်မှာ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး လည်ပင်း၊ လက်မောင်းနှင့် ပေါင်ရှိသွေးကြောထဲပြွန်ထည့်ပြီး ဓါတ်မှန်မှာပေါ်သောဆိုးဆေးဖြင့် သွေးကြောထဲထိုးသွင်းပြီး ရိုက်ယူပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန်က လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခိုင်းပြီး သင့်နှလုံးက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာကို လေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို stress test လို့ခေါ်ပါတယ်။
ECG ရိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်နှလုံးခုန်မမှန်တာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်နှလုံးရဲ့ လျှပ်စစ်စီးမှုကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆရာဝန်တွေကို နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားကပ်ခြင်းလား၊ တခြားအခြေအနေလား သိအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းက လူနာတော်တော်များများမှာ တွေ့ရတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ကုသမှုခံယူဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကြောင့် နှလုံးသွေးတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျန်နေတဲ့ လူနာတွေမှာ မလုံတဲ့အဆို့ရှင်ကို ခွဲစိတ်ပြီး ပြုပြင်ခြင်း ၊ အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားကပ်ခြင်းကြောင့် နှလုံးသွေးတွေကျန်ပြီး နှလုံးကြပ်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေမှာ ခွဲစိတ်တာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
Echo မှာ နှလုံးသွေးကျန်မှု မရှိတဲ့လူနာတွေမှာ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းဟာ ဘာမှမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်းအတွက် ကုသမှုကမတူနိုင်ပါဘူး။ ပါဝင်နိုင်တာတွေကတော့-
အနားယူခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချစေတဲ့ နည်းများ
ကဖိန်းနှင့် လှုံ့ဆော်စေတဲ့ အရာတွေကို ရှောင်ခြင်း
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကြောင့် ရင်အရမ်းတုန်တဲ့လူနာတွေမှာ နှလုံးခုန်နှေးအောင် Beta blocker ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းအတွက် နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ဘာတွေလဲ။
နှလုံးအဆို့ရှင်ပြားကပ်ခြင်းကို ခံစားနေရတဲ့ လူတော်တော်မျာများမှာ ရောဂါလက္ခဏာမတွေ့ရဘဲ သာမန်အတိုင်းပဲ နေနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက သင့်နေထိုင်မှုနဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပြောင်းလဲကန့်သတ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သို့သော် လူနာက ပြောင်းလဲဖို့ ဆန္ဒရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။ တကယ်လို့သင့်မှာ နှလုံးသွေးကျန်တာက ဆိုးရွားလျှင် အခြေအနေပိုမဆိုးအောင် ဝိတ်မခြင်းကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်အခြေအနေကိုသိရန် ဆရာဝန်က ပုံမှန်ပြန်ပြဖို့ ညွှန်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/HeartValveProblemsandDisease/Problem-Mitral-Valve-Prolapse_UCM_450441_Article.jsp#.WCNWTpA2sds. Accessed November 09, 2016.
Mitral valve prolapse. http://www.webmd.com/heart/mitral-valve-prolapse-symptoms-causes-and-treatment#2. Accessed November 09, 2016.
Mitral valve prolapse. http://www.healthline.com/health/mitral-valve-prolapse#Overview1. Accessed November 09, 2016.